Sorona Masina ny 06/03/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 06/03/2021
Salamo 144, 8-9
Antra sy mangoraka ny Tompo, tsy malaky tezitra ary be hatsaram-po! Tsara fo amin’ny olon-drehetra ny Tompo; mambomba ny asany rehetra ny fangorahany!
Andriamanitra ô, nomenao fanafody sarobidy izahay mbola mivahiny amin’itý tany itý ary nataonao miombona anjara sahady amin’ny zava-tsoa any an-danitra; koa mba tantano amin’izao fiainana diavinay izao ho tody soa aman-tsara any amin’ilay hazavana misy Anao.
Bokin’i Mikea Mpaminany
Mikea 7, 14-15. 18-20
Ario any ambany ranomasina ny fahotanay rehetra.
Ary nivavaka i Mikea mpaminany, ka nanao hoe: “Andraso amin’ny tehinao ny vahoakanao, ry Tompo, dia ny ondry lovanao, izay monina mitokana any an’ala, eo afovoan’i Karmela; aoka hiraoka any Basàna sy any Galaada izy, toy ny tamin’ny andro taloha. Toy ny tamin’ny andro nivoahanao avy any amin’ny tany Ejipta, anehoy zava-mahagaga izahay. Iza no Andriamanitra tahaka Anao, izay manesotra ny fahotana ary mamela fahadisoana an’izay sisa amin’ny lovanao? Tsy mba ataonao mahery mandrakizay ny fahatezeranao fa ny mamindra fo no sitrakao. Mamindrà fo aminay indray re ka hitsakitsaho ny faharatsianay. Ario any ambany ranomasina ny fahotanay rehetra ampisehoy amin’i Jakôba ny fahamarinanao, sy amin’i Abrahama ny famindram-ponao; izay efa nianiananao tamin’ny razanay hatramin’ny andro faha-taloha.”
Salamo 102. 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Fiv.: Mpamindra fo sy antra ny Tompo.
Tsy mba lalandava no ifandaharany, na mandrakizay no irehetan’ny fony. Tsy araka ny otantsika no ataony antsika! na araka ny helotsika no avaliny antsika.
Fa tahaka ny haavon’ny lanitra ambonin’ny tany, no haben’ny hatsaram-pony amin’izay matahotra Azy. Tahaka ny ifanalaviran’ny Atsinanana sy Andrefana no analavirany amintsika ny hadisoantsika.
Voninahitra ho Anao, ry Kristy, Tenin’Andriamanitra.
Hitsangana aho ho any amin’ny raiko, ka hanao aminy hoe: “Dada ô, nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho.”
Lk. 15, 1-3. 11-32
Io rahalahinao io dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray.
Tamin’izany andro izany, nanatona hihaino an’i Jesoa ny poblikanina sy ny mpanota, ka nimonjomonjo ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna nanao hoe: “Ilay itý mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy.” Dia nanao itý fanoharana itý tamin’izy ireo i Jesoa nanao hoe: “Nisy lehilahy anankiray nanan-janaka mirahalahy, ka hoy ilay zandriny tamin-drainy: ‘Dada ô, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy.’ Dia nozarainy tamin’izy roa lahy ny fananany. Nony afaka andro vitsivitsy, dia nangonin’ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy nandany ny fananany tamin’ny fitondran-tena ratsy. Rahefa laniny avokoa ny fanany rehetra, dia nisy mosary lehibe tamin’izany tany izany ka nahantra izy. Dia lasa ny anao nikarama tamin’ny tompon-tany anankiray hiandry kisoa tany an-tsaha. Naniry hivoky ny hodi-boan-javatra nohanin’ny kisoa izy, fa tsy nisy nanome azy. Izay vao nody ny sainy ka hoy izy: ‘Firifiry akory moa ny mpikaraman’i dada no manan-kanina be, nefa izaho kosa itý maty noana atý! Hitsangana aho ho any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Dada ô! efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hantsoina hoe zanakao intsony; fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin’ny mpikaramanao re aho.’ Dia niainga izy ka lasa nankany amin-drainy. Mbola lavitra kosa izy, dia nahatazana azy rainy, ka onena nidodododo nitsena azy, namihina ny vozony sy nanoroka azy. Dia hoy itý zanany taminy: Dada ô! efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hantsoina ho zanakao intsony.’ Fa hoy rainy tamin’ny mpanompony: ‘Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjòy azy, asio peratra ny rantsan-tanany, kiraròy ny tongony, ary ento ny zanak’omby matavy ka vonoy, dia aoka hihinana sy hifaly isika, fa itý zanako itý dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray.’ Dia nifaly izy rehetra. Sendra tany an-tsaha kosa ny zanany lahimatoa tamin’izay. Nony nody izy sy mby teo akaikin’ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy, ka niantso ankizilahy anankiray sy nanontany azy izay anton’izany. Dia hoy ilay mpanompo taminy: ‘Tonga ny rahalahinao, ka namono zanak’omby matavy rainao, satria tafaverina soa aman-tsara izy.’ Dia tezitra izy, ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy hampandroso azy. Fa hoy ny navaliny an-drainy: ‘Indro efa ela no nanompoako anao, ary tsy mbola nandika ny didinao akory aho, nefa tsy mbola mba nomenao zanak’osy iray akory hifaliako amin’ny sakaizako; fa nony tonga kosa io zanakao io izay avy nandany ny fananany tamin’ny vehivavy janga, dia namonoanao zanak’omby matavy izy.’ Fa hoy rainy taminy: ‘Ianao, anaka, dia eto amiko mandrakariva ka anao avokoa izay rehetra ananako; fa mety kosa ny manao fihinanam-be sy fifaliana, satria io rahalahinao io, dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray.’”
Enga anie, ry Tompo, ho tanteraka amin’izao Sakramenta izao ny vokatra mahavonjy anay hanafaka anay lalandava amin’ny fanaranam-po mahazatra ny olombelona ary hanampy anay hahazo ny fanomezana mahasoa mandrakizay.
Lk. 15, 32
Rariny, anaka, raha mifaly ianao, satria ny zandrinao, maty ka velona indray, ary very ka hita indray.
Ny hanina masina noraisinay tamin’izao Sakramenta masina izao anie, ry Tompo, haninteraka ny fonay ka handaitra tokoa handraisanay anjara amin’ny vokatsoa aterany.